कांग्रेसको पदयात्रा आजबाट सुरू – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कांग्रेसको पदयात्रा आजबाट सुरू
नारायणगढ । कांग्रेसले लौह पुरूष गणेशमान सिंहले जेल तोडेर भारत जाँदा प्रयोग गरेको ऐतिहासिक मार्गमा पदयात्रा सुरू गर्नेे भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता सिंहको स्मृतिमा पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिÔण प्रतिष्ठानले आज बिहीबारबाट चितवनको भरतपुरबाट अभियानको दोस्रो चरणअन्तर्गत पदयात्राको कार्यक्रम गर्न लागेको हो । अभियानको दोस्रो चरणको कार्यक्रम कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलबाट उद्घाटन हुनेछ ।
चितवनवाट सुरू भएको पदयात्रा पर्साको ठोरी, मकवानपुरको भीमफेदी हु“दै चैत २३ मा काठमाडौं पुग्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा हुने पदयात्रा समापन समारोहमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबाट सम्बोधन हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरूङले चितवनबाट सुरू हुने पदयात्रामा कांगेसका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहनेछ । गणेशमान सिंह जन्मेको सय वर्È पुगेको अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको जिल्ला सभापति गुरूङले बताए । उद्घाटनको दोस्रो दिन शुक्रबार नेता सिहंका छोरा तथा पार्टीका महामन्त्री र सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकासमान सिंह पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने गुरूङले जानकारी दिए ।
ठोरी पुगेर उपप्रधानमन्त्री सिंह काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ । पदयात्रा उद्घाटनअघि नारायणगढमा विसं. २०१८ सालमा चितवनमा भएको सशस्त्र संघर्È र ३६ सालको संघर्Èमा लागेका योद्धाहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको जिल्ला सभापति गुरूङले बताए । विसं. २००७ सालको क्रान्तिको तयारीमा सक्रिय रहेका बेलामा गणेशमान सिंह सोही वर्Èको असोज २७ मा चितवननजिकको ठोरीमा समातिएका थिए ।
चितवन हु“दै ठोरी पुगेर क्रान्तिको तयारीमा लागेका बेला पक्राउ परेपछि सिंहलाई पर्साको वीरगञ्ज हु“दै मकवानपुरको भीमफेदीबाट काठमाडौं लगिएको थियो । सोही बाटो हु“दै ‘कांग्रेसले लौह पुरूÈ गणेशमान सिंह शान्ति पदयात्रा’ गर्न लागेको हो । चितवनबाट सुरू हुन लागेको पदयात्राबारे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको छ । राणा विरोधी आन्दोलनमा प्रक्राउ परेर जेलमा रहेका गणेशमानले विसं. २००१ सालको असार ७ गते भद्रगोल जेलको पर्खाल नाघेर भागेका थिए ।
काठमाडौं, धादिङ, गोरखा हु“दै उनी रुपपन्देहीबाट भारत छिरेका थिए । सो मार्गमा पनि पार्टीले पदयात्रा सञ्चालन गरी सकेको छ । फागुन २६ मा सुरू भएको पहिलो चरणको पदयात्रा सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणको पदयात्रा टोली चैत २३ मा काठमाडौं पुगेपछि २७ गते काठमाडौंमा समापन कार्यक्रम हुने भएको छ ।
पदयात्रा टोलीमा हजार जना सहभागी हुने छन् । टोलीले बीचबीचमा कोण सभाहरु पनि गर्नेछ । गणेशमानका योगदानलाई स्मरण गर्दै गाउ“गाउ“मा लोकतान्त्रिक जागरण ल्याउन पदयात्रा आयोजना गरिएको हो ।